Nagu saabsan | Nashville VOAD
Nashville VOAD waxay kobcisaa bixinta adeegyada wax ku oolka ah ee looga jawaabayo bulshooyinka Degmada Davidson ee ay masiibadu saamaysay.
Nashville VOAD waa isbahaysi ka kooban daraasiin aan faa’iido doon ahayn, ururada bulshada, machadyada caqiidada ku salaysan, iyo waaxaha dawlada oo wada shaqaynaya si loo xaqiijiyo ka jawaabida wax ku oolka ah ee musiibooyinka iyada oo loo marayo iskaashiga, xidhiidhka, isuduwidda, iyo iskaashiga.
Hadafka Nashville VOAD waa in la bixiyo aqoonta iyo agabka inta lagu jiro wareegga musiibada-diyaarinta, yaraynta, jawaab celinta, iyo soo kabashada-si loo caawiyo badbaadayaasha musiibada ee bulshooyinka Degmada Davidson.
Xiliyada masiibada firfircooni jirto, Nashville VOAD waxay siisaa hal dhibic oo iskudubarid dhammaan ururada xubnaha ka ah ee doonaya inay caawiyaan badbaadayaasha bulshadeena si baahiyaha loo daboolo sida ugu hufan ee suurtogalka ah.
Ujeedada abuurista VOAD waa in la xoojiyo isku-dubbaridka iyo u-diyaargarowga masiibooyinka aagga oo dhan iyadoo la wadaagayo barnaamijyada, siyaasadaha, macluumaadka, iyo ka-qaybgalka qorshaynta wadajirka ah, waxbarashada, iyo tababarka.
In kasta oo aan aad ugu firfircoon nahay jawaab celinta iyo soo kabashada, waxaan ka qaybqaadannaa dhammaanafarta weji ee > : Jawaabta >> .
Nashville VOAD waa xubin ka tirsan TN VOAD oo xiriir la leh Ururada Iskaa wax u qabso ee Qaranka ee ka shaqeeya Musiibada.
VOAD-da Qaranka waxa la aasaasay in ka badan 50 sano ka hor iyada oo ka jawaabaysa caqabadaha ururo badan oo musiibo ah oo la kulmay ka dib Hurricane Camille, duufaanta qaybta 5 ee ku dhufatay Xeebaha Gacanka Agoosto, 1969.